Kedu mgbe ịṅụ ọgwụ ọjọọ na-amalite? - Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home Kedu mgbe ịṅụ ọgwụ ọjọọ na-amalite?
Gary Wilson jụrụ ajụjụ doro anya gbasara ọgwụ ọjọọ riri ahụ: "Ego ole karịrị?" na yourbrainonporn.com weebụsaịtị. Ọ na-ekwu na ajụjụ a na-eche na mmetụta porn bụ ọnụọgụ abụọ. Nke ahụ bụ, ị nweghị nsogbu ọ bụla, ma ọ bụ na ị bụ onye ọgwụ ọjọọ riri ahụ. Otú ọ dị, ụbụrụ na-emetụta ụbụrụ na-agbanwe na ụdịdị dị iche iche. Enweghị ike ịkọwa ha dị ka oji na ọcha. Ha abughi ma obu ma obu. Jụ ebe mmadụ gafere ahịrị leghaara ụkpụrụ nke neuroplasticity anya. Brainbụrụ na-amụ ihe mgbe niile, na-agbanwe ma na-emegharị na nzaghachi gburugburu ebe obibi.
Nnyocha e mere na-egosi na ọbụna ntakịrị ihe mmetụ nke supernormal nwere ike ime ka ụbụrụ gbanwee ngwa ngwa ma gbanwee omume.
Dịka ọmụmaatụ, ọ na-ewe naanị 5 ụbọchị iji mee ka ihe nrịba ama akara ka egwuregwu vidio na ndị okenye toro eto. Ndị na-egwu egwuregwu ahụ adịghị eri ahụ, mana ọrụ ụbụrụ dị elu kwekọrọ na agụụ ha nwere igwu egwu. Na ọzọ nnwale, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oke niile nyere oke nri "nri kọfịia" na-aba oke oke. O were ụbọchị ole na ole nke iri nri ratụ ratụ nye ndị na-anabata bekee 'dopamine. Nke a belatara afọ ojuju ha iri. Enweghi afọ ojuju mere ka ụmụ irighiri nri karịa.
Maka porn Internet, nke a Ọmụmụ German site n'aka Max Planck Institute na-ele anya na ndị ikom bụ ndị na-eji ọrụ egwu egwu egwu. Ọ chọpụtara na mgbanwe ụbụrụ dị njọ na-eri ahụ. Ka ha na-erekwu egwu ha, njikọta na-adịghị arụ ọrụ dị n'etiti echiche na akụkụ uche nke ụbụrụ. N'otu oge ahụkwa, enweghi ụbụrụ nke ụbụrụ na-eme ka ọ bụrụ egwu, ka ha na-erekwu egwu. Nke a bụ ihe ịrịba ama nke njedebe nke ịghachị azụ mgbe mmadụ na-eji ụdị nrụgide ụfọdụ. Ka oge na-aga, ha ga-achọ ihe na-awụ akpata oyi n'ahụ ma ọ bụ ihe dị egwu iji kpalie ihe.
An Nnyocha Ịtali chọpụtara na 16% nke ndị nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị na-erepịa porn ihe karịrị otu ugboro n'izu nwere ọchịchọ agụụ mmekọahụ na-adịghị mma. Jiri ya tụnyere 0% nke ndị na - abụghị ndị na - egwu egwu na - agụ agụụ mmekọahụ dị ala.
Nsogbu na-enweghị ahụ riri ahụ
Ihe wepụ bụ na ịṅụ ọgwụ ọjọọ adịghị mkpa maka mgbanwe ma ọ bụ mmetụta ọjọọ.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ịkwa mma nke mmekọahụ, ịmara ihe, ịdapụsị uche na mgbanwe ụbụrụ ndị ọzọ na-eri ahụ, na-eme n'ụzọ dị iche iche. Mara kwa ụbụrụ anyị mgbe niile na-amụ ma na-eme mgbanwe maka gburugburu ebe obibi. Porn Intanet bụ ihe ntanetị nke supernormal. Ọ na-elekwasị anya na mmemme mmekọahụ gị, na-emepụta ụbụrụ na ntụgharị uche.
Ọ bụrụ na ịchọrọ inyocha nchọpụta n'ime njikọ dị n'etiti egwu porn na nchekasị ndị mmadụ, pịa Ebe a. Nke a ga - ebuga gị na saịtị mpụga ma mepee na windo ọhụrụ.
Inweta Enyemaka >>